Hubi higaadda websaydhka > Vielhuber David
Hubi higaadda websaydhka11
Higaad otomaatig ah iyo hubinta naxwaha ayaa hadda ah aaladda halbeegga u ah barnaamijyada ka shaqeynta ereyada - laakiin hubinta hingaadda degellada si otomaatig ah waxay u ahayd mid aad u dhib badan illaa iyo hadda. Google Chrome waxay qaadaysaa talaabadii ugu horaysay jihadaas iyada oo ay ku socoto hubin isku dhafan oo ku saabsan meelaha laga soo galo xariiqyo badan (textarea) Hadda waxaa jira adeeg taas ka dhigaya mid suurtogal u ah dhammaan bogagga internetka.
Adeegga Duden-Web-Proof wuxuu hubiyaa boggaga internetka ee riixida badhanka adigoon rakibin softiweer dheeraad ah - waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad galiso URL-ka. Imtixaanka ka dib, isticmaaluhu wuxuu helayaa warbixin imtixaan faahfaahsan oo leh talooyin ku saabsan sixitaanka naxwaha iyo higgaadinta, oo si toos ah looga dhex arki karo websaydhka.
Soo bandhiggu ma aha bilaash, hase yeeshe: sicirka aasaasiga ahi waa 8 5.89 (oo ay ku jiraan VAT) illaa shan bog. Isticmaalayaasha gaarka loo leeyahay wali way tijaabin karaan adeegga bilaash ah: Hal URL maalintii waa suurtagal. Adeeggu wuxuu kaliya kaydiyaa domainka xididka gudaha iyo sida muuqata kaliya wuxuu ku kala duwan yahay sifooyinkaan. Waa suurtagal in dhammaan shabakaddaada lagu tijaabiyo bilaash adoo adeegsanaya adeegyo gaagaaban oo URL ah sida bit.ly iyo wixii la mid ah.